Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l1313 zom
Zoma 29 Mar.
"Ary arakaraka ny handrosoan'ireo taona tsy hanam-pahataperana, dia hitombo hatrany ny fanambarana ny hasoa sy ny voninahitry ny fanambarana momba an'Andriamanitra sy Kristy. Ary arakaraka ny hitomboan'ny fahalalana, no hitomboan'ny fitiavana, ny fanajana sy ny fahasambarana koa. Arakaraka ny hahafantaran'ny olona bebe kokoa ny amin'Andriamanitra, no hampitombo ny fankalazany ny toetrany. Rehefa sokafan'i Jesosy eo anoloan'izy ireo ny zava-
miafin'ny fanavotana sy izay vita tamin'ny fikatrohana ilay ady lehibe nifanaovana tamin'i Satana, dia hientanentana ho amin'ny fitiavana mafana ny fon'ny voavotra, ary amim-pifaliana sy firavoravoana bebe kokoa no hanaovany hira mamy loatra amin'ny lokanga volamenany; ary feo alinalina sy arivoarivo tsy manam-pahataperana no hiara-miredona hiram-piderana mireondreona (...)
"Mifarana hatreo ilay ady lehibe. Tsy misy intsony ny fahotana sy ny mpanota. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. Miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'Ilay Mpamorona izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Hatramin'ny 'atoma' kitika indrindra ka hatramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra, na ny manan'aina na ny tsy manan'aina dia samy manambara amin'ny alalan'ny hakantony sy ny fifaliany safononoka fa Andriamanitra dia fitiavana." — HM, tt. 705,706.
Manangòna andalan-tsoratra betsaka araka izay azonao atao, indrindra avy ao amin'ny bokin'ny Apòkalipsy, izay miresaka momba ny tany vaovao. Ifanakalozy hevitra ao amin'ny kilasinao izay ambaran'izany andalan-tsoratra izany. Lafiny inona amin'ny tany vaovao no manintona anao indrindra? Lafiny inona no saro-takarina indrindra?
Manao ahoana ny fifamatorana misy eo amin'ny foto-pinoana momba ny famoronana, araka izay voambara ao amin'ny Gen. 1 sy 2, sy ny foto-pinoana momba ny famoronana indray ny lanitra sy ny tany? Ahoana no ho fahatakarantsika io famoronana indray io raha marina ny foto-kevitra fa nampiasa ny fivoarana miandalana Andriamanitra?
Vakio ny Ròm. 8:18 sy ny 2 Kòr. 4:16,17. Inona no ambaran'i Paoly eto, ary ahoana no andraisantsika fankaherezana avy amin'izany teny izany?
Diniho misimisy kokoa ny foto-kevitra manontolo momba ny maha-"famerenana amin'ny laoniny" ny filazantsara. Midika inona izany teny izany? Inona no haverina amin'ny laoniny? Amin'ny fomba ahoana no hahatanteraka izany famerenana amin'ny laoniny izany? Ary inona no anjara asantsika, raha misy, eo amin'izany dingana izany?
Inona no ambaran'ny teny fikasana momba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao amintsika mikasika ny toetran'Andriamanitra?